ठगीको आरोपमा अनमोलको स्पष्टिकरण- ‘मेरो चरित्रहत्या गर्न खोजियो’ | Cine Khabar
Home feature news ठगीको आरोपमा अनमोलको स्पष्टिकरण- ‘मेरो चरित्रहत्या गर्न खोजियो’
ठगीको आरोपमा अनमोलको स्पष्टिकरण- ‘मेरो चरित्रहत्या गर्न खोजियो’
on: २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १८:४२ In: feature news, newsTags:
नायक अनमोल केसीले ५ लाख ठगीको आरोप लागेको थियो। उनले ‘धुपौरे’ नामक फिल्ममा काम गर्ने सम्झौता गर्दा ५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। पछि फिल्ममा काम नगर्ने भन्दै अनमोल पछि हटे। तर, लिएको ५ लाख फिर्ता नगरेको भन्दै निर्माताद्वय जयन श्रेष्ठ र रुपेन्द्र खड्गीले प्रहरी परिसर टेकुमा अनमोल बिरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गराए।
आइतबार अनमोलले आफूबिरुद्ध लागेको ठगीको आरोपको विषयमा स्टाटस नै लेखेका छन्। अनमोलले आफूलाई ठगीको आरोप लागेकोमा स्तव्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू बाहिर भएको समय नियोजित रुपमा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको पनि लेखेका छन्।
म अनमोल केसी। म र मेरो फिल्म मन पराउनु हुने दर्शक तथा शुभचिन्तक एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरु। म फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ सुटिङको सिलसिलमा व्यस्त भई काठमाण्डौ बाहिर भएको बेलामा म माथी ५ लाख रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेको बारेमा मिडिया मार्फत सुनें र स्तब्ध भएको छु। यो कुराको स्पष्टिकरण म मिडियाकर्मी मित्रहरुको सामु उपस्थित भएरै दिन चाहन्थें तर म अहिले सुटिङ्गको क्रममा काठमाण्डौं बाहिर रहेकाले यही मार्फत आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु।
करीब ३,४ महिना पहिला ‘धुपौरो’ नामक सिनेमाको साइन गरेको थिएँ। फिल्म साइन गरे बापत फिल्मका निर्माताले साइनिङ्ग अमाउण्टको रुपमा रु. ५ लाख दिनु भएको थियो। यहाँहरु सबैलाई अवगतै छ कि मैले फिल्म साइन गर्दा मेरो विवेकले भ्याएसम्म स्क्रीप्टलाई प्राथमिकता दिने गरेको छु। ‘धुपौरो’ साइन गर्दा मैले यसको वानलाइन स्टोरी मात्र सुनेको थिएँ। स्क्रीप्ट तयार भएर आउँदा त्यो मैले सुनेको वानलाइन भन्दा धेरै फरक थियो। मैले निर्माता निर्देशकलाई स्क्रीप्टमा थप काम गर्न आग्रह गरें। स्क्रीप्टमा थप मेहनत गरेर अझै राम्रो सिनेमा बनाऊ भन्नु के मेरो गल्ती हो र ?
तर उहाँहरुले त्यही स्क्रीप्टमा सुटिङ्गमा जान मलाई कर गर्नु भयो जुन मैले मानिन्। यही कुरामा मत बाझियो र यही स्क्रीप्टमा फिल्म बनाउनुहुन्छ भने तपाईँहरुको पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरुले लिन मान्नु भएन। र, अहिले अचानक उल्टो म माथी ठगीको आरोप लागेको सुन्दा म स्तब्ध भएको छु। अहिले पनि उहाँहरुले मैले लिएको पैसा जतिबेला पनि लिएर जान सक्नुहुनेछ।
मैले यसो भनिरहदा धेरैलाई लाग्न सक्छ पुरै स्क्रीप्ट नपढी किन फिल्म साइन गरेको त ? मैले माथी नै भनिसकें कि नेपाली फिल्म इन्ड्रष्टी सानो छ र यहाँ धेरै काम विश्वासका आधारमा हुन्छन्। मैले फिल्मको स्क्रीप्टमा थप होमवर्क गरौं भन्दा उहाँहरुले इगोको रुपमा लिनुभयो र म सुटिङ्गको शिलशिलामा बाहिर भएको मौका छोपी मेरो चरित्रहत्या गर्न खोज्नु भएकोमा म अत्यन्त दुखी भएको कुरा अवगत गराउँदै वहाँहरुसँग एडभान्स लिएको रकम जुनसुकै समयमा म फिर्ता दिन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
‘बाघी ३’मा टाइगरको तारिफ
‘थप्पड’ फ्लप भन्नेलाई निर्देशकले गरे गाली